NBA 2K18 Amathiphu & Tricks (imininingwane release) | www.HacksWork.com
September 20, 2017 Imidlalo Hacks ( PC / PS / Xbox), Ezenye aphambe, PC Okugcwele Imidlalo
Ngiyaqiniseka ukuthi kakade ukuthi NBA 2K18 ufikile kuleli sonto zikanye 2K Ezemidlalo waphinda ngifuna efana embonini lapho kuziwa kwezemidlalo isiqophi imidlalo. Lena isikhathi esihle ukuxoxa the best-NBA 2K18 Amathiphu & Tricks kuze kube manje. Ukuze kakhulu, esinye sezici mnandi i ukukhululwa yonyaka iyona izilinganiso umdlali eyakhelwe kusuka phansi yi-onjiniyela esekelwe Izenzakalo zangempela ku inkantolo.
NBA 2K18 etholakalayo PS4, Xbox One, futhi Nintendo Shintsha lwakamumva
I kuphindelelwa kwakamuva kwe-SIM kwesizini basketball manje isiyatholakala PS4, Xbox One, kanye Nintendo Shintshela. Noma ubani namanje amageyimu ku-Xbox 360 noma PlayStation 3 uzokwazi ukuthenga NBA 2K18, kodwa njengoba la ezisekelweni Akasekho focus yentuthuko, kungenzeka lezi edishini uyofana kakhulu ukukhishwa odlule.
NBA 2K18 Nintendo Shintsha Yokuxhumana futhi ngesadla On Okuvelayo
Sisanda got hands-on nge-NBA 2K18 ngesikhathi kusengaphambili umcimbi okhethekile e-New York, futhi asikwazi manje ukuqinisekisa ukuthi kuyoba Nintendo Shintsha nguqulo ye umdlalo eduze ngokwanele ncamashí PS4 kanye Xbox One izinguqulo. Njalo kwimodi olulodwa, kuhlanganise MyGM, MyPlayer, futhi MyTeam zizofakwa ku version Shintsha yomdlalo, okusho ngeke uphuthelwa yiziphi izici.
Le nguqulo Shintsha of NBA 2K18 uyophinde isici Amiibo ukweseka, nakuba singazi okwamanje ukwazi kuliphi ilungelo, futhi umdlalo ngeke qalisa esiqalisweni 30 ngesekhondi kuzo zombili imodi idokhiwe kanye aphathwayo. Hlola okuvelayo umhleli wethu Kat Bailey sika okusheshayo version Shintsha ngezansi nje:
NBA 2K18 okusha Yangasekhaya Social Club Isici
Ngesikhathi eziphawulwe ngenhla okunzima preview umcimbi NBA 2K18, sifika kancane ngokokuqala ngqá e-Yangasekhaya entsha bazijabulise sici umdlalo, okuyinto ungabona amazwibela ambalwa ngezansi nje. Kubukeka isethi ukuba iforamu umdlali abalingiswa kule mdlalo, ngendlela efanayo ukuthi Splatoon 2 sika Inkopolis Square kukuvumela ukubukisa yakho ifakwe izingubo izinto nezinye izesekeli.
NBA 2K18 Amathiphu & Tricks – Indlela Score Umhlahlandlela !
Amaphuzu kubalulekile uma elizonqoba umdlalo we-NBA 2K18. Kulesi NBA 2K18 Tips Guide sizobe ikutshele ukuthi amaphuzu eziningi amaphuzu ngokushesha futhi kanjani kalula amaphuzu NBA 2K18.
Thatha isikhathi sokufunda abangekho superstars ithimba lakho. Njengasempilweni yangempela Steph Curry kuzohluka kakhulu ukwedlula Kyrie Irving. Ukwazi yangempela ukuthambekela ukuphila umdlali ngamunye futhi uyabaqinisa uzokunika isisekelo omkhulu sendlela ukusebenzisa nozakwabo digital.
Speed ​​obulala – Jamming inkinobho Sprint igcina abadlali bakho bakhathala futhi kukwenza nkomoni. Hlanganisa kuze ijubane lakho lapho Dribbling bese usebenzisa Sprint yakho e izikhathi lapho wasemuva yakho ngeke kancane lindela it.
Ungabi ozonda isidlali – Thatha isikhashana futhi ufunde ezinye nama udlala leqembu oyisebenzisayo. Ngenani umkhuba mode futhi ukusebenzisa lezo udlala ne play imidvwebo ku. Lokhu ngeke akuvumele kokubili ukubona kufanele ugijime kanjani bese ikunikeza umqondo ku Isikhala play ngamunye kufanele asebenze kanjani.
"Khetha" ushevu yakho – Omunye kudlala Underrated kunazo zonke basketball kuyinto Pick and Roll. Lokhu play ezicashile unika kokubili izingxenye icala imizila multiple ngawo ukuwuqondisa bese igcina ukuzivikela ukuqagela. Pick and Roll umdlalo uya ezingeni elilandelayo uma une abadlali kuzongisiza ke esusela Bhalobhasha futhi umsiki isici. Futhi khumbula ukuthi uma une "omkhulu" ukuthi unohleloxhumano maphakathi no-range shot, wena kungabangela umonakalo nakakhulu.
Khumbula ukuthi ninezinto eziningi ngokudlula kuka asetshenziselwa wena. Ukudluliswa akudingeki kuphela ukuba esifubeni labo. Bounce maqembu kumnandi okuthumela okufakiwe, maqembu Lead iyisimangaliso ukusika abadlali. Njalo ucabanga lapho ufuna umdlali ukuba esikhundleni lapho okwamanje. Uzoba uhambe kusuka Raymond Felton ukuba Jason Kidd ezingeni Ukudlula Ngokuphazima kweso.
"Ukunyakaza we Ocean" – Amathimba Sakhe emacaleni ezinyakazayo ukuthi yakhelwe kubasebenzi babo. Uma ubona play sokudiliza, ungesabi ukuvumela freestyle ithimba. Ungase uthole ezinye ubuhle ezindaweni wena besingalindele.
Ungakhohlwa bamelele abadlali – Uma udlala umdlalo sekulingisa ijubane nge umdlalo imizuzu egcwele ungafuna ukugcina izinkanyezi kwakho kukusha. Ukubeka kwezinye abadlali ebhentshini phambi isigamu uyobagcina isilungele ngesiwombe sesibili futhi ikuvumela ukuba uthole ujwayelene amanye amalungu eqembu yakho. Ungasebenzisa futhi i-sokuvala ukubambezela umdlali ezishisayo ku ithimba abaphikisi sika.
Ngiyabonga ukufunda NBA 2K18 yami Amathiphu & Tricks ukuthumela !
Khumbula !!! Uhlelo oluvamile lwe-NBA 2K18 Game iyatholakala ukuthenga 49.99 EUR (52 $) ngesikhathi umusi <<LAPHA>>
kanye namasu, Aphambe, INDLELA BATHOLE UMSIPHA Nge UMDLALI SAKHO NBA 2K18, indlela amaphuzu 2k18, indlela amaphuzu amaningi amaphuzu ngokushesha NBA 2K18, My NBA 2K18 - Interesting Umhlahlandlela: Amacebo, nba 2k18 umkhonyovu, NBA 2K18 aphambe Amakhodi Amathiphu Tricks Izingqinamba Izimfihlo, nba Izilawuli 2k18, NBA 2K18 Umhlahlandlela, nba 2k18 okuvelayo, amasu nba 2k18, nba amathiphu 2k18 & namaqhinga, nba amathiphu 2k18 namasu, NBA 2K18 Tips Guide, Interesting for NBA 2K18 Amaphuzu